कहिले सुध्रेलान् नेपालका वायुसेवा ? | गृहपृष्ठ
Home पाठक विचार कहिले सुध्रेलान् नेपालका वायुसेवा ?
on: June 02, 2017 पाठक विचार
कहिले सुध्रेलान् नेपालका वायुसेवा ?
यूरोपेली सङ्घले नेपाली विमान कम्पनीहरूलाई प्रतिबन्धित वायुसेवा कम्पनीको सूचीमा राखेको करीब ४ वर्ष भएको समाचार पढ्दा ज्यादै दुःख लागेको छ । नेपालको एकमात्र सरकारी स्वामित्वको वायुसेवा नेपाल वायु सेवा निगमको हालत हेर्दा त सधैं नै त्यस्तो प्रतिबन्धमा परिरहने देखिन्छ । अहिले आएर निजीक्षेत्रका विमानहरू पनि एकपछि अर्को दुर्घटनामा परिरहेका छन् । त्यसले नेपाली विमान कम्पनीहरूलाई एयर सेफ्टी प्रतिबन्धको सूचीमा रहन झनै मलजल गरेको देखिन्छ ।
लामो समयको प्रयास गर्दा पनि प्रतिबन्धित वायुसेवा कम्पनीको सूचीबाट नेपाली विमान कम्पनीहरू हट्न नसक्दा नेपाली वायुसेवा कम्पनीको यूरोप उडान प्रभावित हुनु स्वाभाविकै हो । यसले विमान सेवा कम्पनीलाई आफ्नो सेवा विस्तारमा असर पारेको छ भने यूरोपेली मुलुकबाट सीधा हवाई सम्पर्क नहुँदा नेपालमा आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा पनि सुधार हुन नसक्नु स्वाभाविकै हो ।
नेपाली वायु सेवा निगममाथिको एयर सेफ्टी प्रतिबन्ध हटाउन सरकारी र कूटनीति पहल गरिएको समाचारमा जनाइएको छ । हवाई यात्रुको सुरक्षाका लागि अपनाइएको त्यस्तो प्रतिबन्ध कुनै सरकारको पहलमा फुकाउन खोज्नु कदापि राम्रो होइन । विमान सेवा कम्पनीहरूले नै आफ्नो सेवाका माध्यमबाट नै यात्रुहरूको विश्वास जित्न सक्नुपर्छ । अरू विमान कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्नुपर्छ । त्यसो भएमा मात्र यूरोपेली सङ्घले प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न सक्छ र यात्रुहरू पनि ढुक्कले यात्रा गर्न सक्छन् । कूटनीतिक पहलका आधारमा प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दा यात्रुमा विश्वास जगाउन सकिएन भने प्रतिबन्ध फुक्नुको कुनै अर्थ नै रहँदैन । त्यसैले नेपालका सम्पूर्ण विमान सेवा कम्पनीहरूले विमान सेवाबाट नाफा कमाउने मात्र उद्देश्य नराखी सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ ।
विमान सञ्चालनमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संलग्न हुने प्रशासनिक क्षेत्रका कर्मचारी, चालकपरिचालक वा आन्तरिक विमानकै पाटपुर्जामा देखिएका समस्याका कारण कुनै पनि यात्रुको जीवन जोखीममा पार्नु कदापि हुँदैन । यसमा विमान कम्पनीमा आबद्ध कार्मचारीको मात्र होइन, कम्पनी सञ्चालकको पनि भूमिका हुनुपर्छ । एउटा विमान दुर्घटनामा पर्दा हुने क्षतिले सीमित व्यक्तिलाई मात्र नोक्सान पुग्ने होइन, समग्र अर्थव्यवस्थामा नै असर पर्न सक्छ ।
गौशाला, काठमाडौं ।